KENYA oo sheegtay inay qabatay ruux fududeeyay weerarkii Hotel Dusitd2 ee Nairobi | HalQaran.com
Home Wararka Maanta KENYA oo sheegtay inay qabatay ruux fududeeyay weerarkii Hotel Dusitd2 ee Nairobi
KENYA oo sheegtay inay qabatay ruux fududeeyay weerarkii Hotel Dusitd2 ee Nairobi
Hotelka Dusitd2, Photo: Google Images
Nairobi (Halqaran.com) – Dowladda Kenya ayaa sheegtay inay xabsiga dhigtay shaqsi lagu tuhmaayo inuu ahaa ruuxii fududeeyay weerarkii Shabaab ay ku qaadeen Hotelka Dusitd2 ee ku yaallo Magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Warbaahinta Kenya ayaa ku waramaysa in Ciidamada ammaanka Magaalada Mombasa ay ka xireen Ninkan oo lagu magacaabo Fawaz Ahmed Hamdun oo 28 jir, xilli uu ku sugnaa gurigiisa.
Ninkaan waxaa soo galay tuhun ah inuu ka mid ahaa maskaxdii ka dambeysay weerarkaasi oo illaa hadda Hay’addaha amniga dalka Kenya ay ku daba jiraan shaqsiyaadkii soo abaabulay weerarkaasi.
Fawaz ayaa waxaa ay dowladda Kenya ku sheegtay in uu ahaa madaxa qorsheynta howlgalkii Dusit D2, waxaana uu sidoo kale marti galiyay sida lagu eedeeyay Ninkii isku qarxiyay Hotelka kaas oo ka baxay Soomaaliya laguna magacaabo Mahir Riziki, sida ay dowladda Kenya hadalka u dhigtay.
Qorsheynta hawlgalkaas kaliya laguma eedeyn ee waxaa kale oo lagu eedeeyay in uu Al-Shabaab u qoray Dhallinyaro badan kuna biiriyay.
Weerarkii Dusit D2 waxaa ay dowladda Kenya sheegtay in ay ku geeriyoodeen 21 qof oo ay ku jireen dad Reer Galbeed ah.
ruux fududeeyay weerarkii